ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများစာရင်းမှာ အဆင့် (၄) ထိပြုတ်ကျသွားတဲ့ Apple - YOYARLAY Digital Media and News
အဆင့် (၄) ထိပြုတ်ကျသွားတဲ့ Apple
အမေရိကန်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Apple ကတော့ အခြေအနေဆိုးတစ်ရပ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ အကြောင်းကတော့ IHS Markit ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများစာရင်းထဲမှာ Apple ဟာ ကိုရီးယားနဲ့ တရုပ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်တဲ့ Samsung၊ Huawei နဲ့ OPPO တို့ရဲ့နောက်ကိုရောက်နေခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၉ ဧပြီ၊ မေနဲ့ ဇွန် (၃) လတာအတွင်း iPhone ဖုန်းလုံးရေ (၃၅. ၃) သန်းတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ချိန်မှာ OPPO က စမတ်ဖုန်းလုံးရေ (၃၆. ၂) သန်းထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး Samsung နဲ့ Huawei တို့ကလည်း စမတ်ဖုန်းလုံးရေ (၇၅.၁) သန်းနဲ့ (၅၈.၇) သန်းစီကို အသီးသီးရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထပ်ထွက်လာသမျှဖုန်းမော်ဒယ်လ်အသစ်တိုင်းက ဈေးမြင့်မားလေ့ရှိတာကြောင့် သုံးစွဲသူတွေက အသစ်ဝယ်ယူဖို့ထက် အဟောင်းကိုဆက်သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာကလည်း iPhone ရဲ့ ရောင်းအားပမာဏကို သိသိသာသာထိုးကျသွားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ Apple အနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးစဈေးကွက်တွေမှာ ပြိုင်ဘက်တွေလို တန်ဖိုးသင့်စမတ်ဖုန်းတွေရောင်းဖို့စိတ်မဝင်စားခဲ့တာက အခုလိုဖြစ်လာစေဖို့အဓိကကျတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။
Previous Previous post: စုန်းမတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းများ
Next Next post: ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံတွေကို အပြီးပိတ်သိမ်းသွားတော့မယ့်ဂျာမနီ